Rafitra fiasa IOS | Vaovao IPhone
iOS no rafitra miasa mamelona ireo fitaovana toa ny iPhone, iPad, iPod Touch na Apple TV. ny ny fahatsorana sy ny fanatsarana no andriny hany ka mpampiasa an-tapitrisany no misafidy ny iOS fa tsy mifidy sehatra hafa izay mila fitaovana matanjaka kokoa hamindra ny rafitra. Isan-taona dia mamoaka fanavaozana iOS lehibe i Apple izay mazàna mitondra fiasa manokana ho an'ireo fitaovana farany manify izay amidy amin'izao fotoana izao.
Ny endri-javatra miafina 11 an'ny iOS 16 tokony ho fantatrao
ny Miguel Hernandez hace 28 mins .
Manohy ny famakafakana amin'ny iOS 16 izahay, ny rafitra fiasan'ny finday an'ny orinasa Cupertino izay ho tonga amin'ny fomba ofisialy…
Ny iOS 16 dia hampiseho famantarana orinasa voamarina ao amin'ny fampiharana Mail
Ny iOS 16 dia amin'ny fomba beta ho an'ny mpamorona toa ny ambiny amin'ireo rafitra fiasa Apple vaovao naseho ...
Apple dia namoaka iOS 2 Beta 16 ho an'ny iPhone
ny Miguel Hernandez hace Andro 4 .
Ny fampivoarana ny iOS 16, ny rafitra fiasa izay hahatratra ny mpampiasa iOS sy iPadOS rehetra mandritra ny…
Ny iOS 16 dia hamela antsika hisoroka ny CAPTCHA amin'ny fampiharana sy tranokala mifanentana
ny Karim Hmeidan hace Andro 5 .
Tsikelikely dia mamaha ny vaovao rehetra momba ny iOS 16, ny rafitra fandidiana lehibe manaraka ho an'ny fitaovana finday…
Veloma amin'ny fifandraisana dika mitovy amin'ny fahatongavan'ny iOS 16
Isan-kerinandro dia mitranga ny betas ho an'ny mpamorona ny iOS 16. Betsaka ny fiasa izay nampidirin'i Apple…
Ireto ny sasany amin'ireo endri-javatra iOS 16 izay efa tao amin'ny Android
Ny fanavaozana iOS lehibe rehetra dia ampitahaina amin'ny dikan-tenin'ny Android, ny rafitra fiasa izay…
Ny endri-javatra miafina amin'ny iOS 16 izay tokony ho fantatrao
iOS 16 dia nanana famelabelarana manokana nandritra ny WWDC 2022. Ary koa, nasehonay anao vao haingana ny fomba ahafahanao mametraka iOS 16…
Noho izany dia afaka mametraka mora foana ny iOS 16 Beta ianao
Ny iOS 16 dia hanome zavatra betsaka horesahina, ny zava-baovao, na dia toa vitsy aza ny sasany, dia…
Ny fampiharana Fitness dia tonga amin'ny iOS 16 hanentanana ny mpampiasa hameno ny peratra Activity
Efa ho herinandro izahay no niaraka tamin'ny beta an'ny iOS 16 ho an'ny mpamorona azo alaina ary tsy misy andro tsy…
Ny iPad dia tsy ivon'ny HomeKit intsony
iOs 16 dia mitondra endri-javatra vaovao maro ho an'ny HomeKit, toy ny fampiharana an-trano namboarina tanteraka sy ny fanohanan'ny Matter ho avy, saingy…
iOS 11 dia manova ny fiasan'ny WiFi sy Bluetooth
Ahoana ny fomba hampiasana ny asan'ny AirDrop ao amin'ny iOS 11 amin'ny iPhone sy iPad
Manana olana amin'ny WiFi amin'ny iPhone ve ianao? Andramo ireo vahaolana ireo
Ahoana ny fomba hijerena antontan-taratasy ao amin'ny iOS 11 miaraka amin'ny app Notes
Inona ny AirDrop?
Lazao ny antso na ny fomba anaovanao ny iPhone hilaza aminao hoe iza no miantso anao
Rohy fampidinana IOS 10
Mamitaka hamonjy angona amin'ny iPhone amin'ny iOS 10
Rohy fampidinana IOS 9